Fiaramanidina fanodinana an-tariby mampiavaka ny Mirror Heating Defogger China Manufacturer
Description:Fiaramanidina Mirindra Fiara manokana,Low temperature Heating Defogger,Tsiranoka manjelanjelatra manjelatra
Home > Products > Home Appliance Heating Film > Mirror Heating Elements > Fiaramanidina fanodinana an-tariby mampiavaka ny Mirror Heating Defogger
Ny Defogger dia kofehy mavesatra ho an'ny solosaina ho an'ny fitaratra. Ny kitapo matevina fotsiny dia mifikitra amin'ny faritry ny fitaratra misy anao. Rehefa tafapetraka indray mandeha dia tsy ho tafiditra ao anatin'ny faritra misy ny palma ny fitaratra. Ny haavon-tsarin'io fitaratra manify io dia avo be ho an'ny fiara hitazona ny fitaratra. Ny hafanana dia azo itokisana ary manaparitaka manerana ny elatry ny fantson-drano izay afenina ao ambadiky ny fitaratra. Ny fiainam-piarahamonin'ny defogger dia manodidina ny 100000 ora. Tsy hisy fiantraikany amin'ny fanatontosana sarimihetsika fanalezana mandritra ny fotoam-pamokarana izany. Aza manahy ny amin'ny fahasimbana na ny fanariana ny fitaratra
Fiaramanidina Mirindra Fiara manokana Low temperature Heating Defogger Tsiranoka manjelanjelatra manjelatra Fiaramanidina fiaramanidina matevina Fitaovam-pandriana mafana Fitrandrahana Fiara Fiofanana Fijerena Miresaka Fanitarana Fitaovam-pandehanana mitandrema matevina